Shina plastika plastika orinasa mpanamboatra sy mpamatsy | Zhongming
Famokarana vokatraNy orinasanay dia namolavola vokatra vaovao, pp fanamboarana volo vita amin'ny volo vita amin'ny vera, mampiasa polypropylene ho fitaovana fototra, fibre fitaratra nohamafisin'ny fibre, ary bobongolo manindry endrika. Ny rafi-pandrafetana dia misy endriny 65 farafahakeliny formwork sy 65 vita amin'ny aliminioma. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitambarana fifandraisana isan-karazany mba mahazaka ny enta-mavesatra fananganana.
Ny vidiny ambany sy ny fandidiana tsotra no tombony lehibe indrindra amin'ny fitambaran'ny fitaovana fitaratra fibre lava. Ny vidiny dia 50% fotsiny amin'ny famolavolana aliminioma, ny lanjany dia 19kg / fotsiny, ny haben'ny mahazatra dia 1200x600mm, ny lanjany dia 14kg fotsiny, mety ny fananganana, haingana ny fanaparitahana sy ny fivoriambe, voavonjy ny mpiasa sy ny ora-olombelona , manamora ny fanamboarana ary manatsara ny hafainganana ny fanamboarana. Mandritra izany fotoana izany, ny formwork vita amin'ny fibre vera lava dia mahatohitra asidra, alkaly ary harafesina, mora diovina, fiainana serivisy lava, ary ampiasaina indray mandeha in-60 mahery.
Amin'ny maha dingana tsotra famokarana azy dia tsy misy fanariana fako misy fako telo. Rehefa avy nahatratra ny fiainam-panompoana dia azo averina namboarina sy namboarina ho vokatra tontonana miaro ny tontolo iainana. Ny formwork fanamboarana volo vita amin'ny volo vita amin'ny vera lava, izay misy tombony amin'ny tanjaka tsara, mora misaraka, plastika tsara, hafainganam-pandeha haingana, mitahiry angovo ary miaro ny tontolo iainana, dia azo ampiharina amin'ny tsenan'ny tranobe maoderina izay manasongadina ny fananganana maitso.
Haben'ny tsanganana: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
Faritra azo ovaina Waling: 200-600mm
Mavesatra maivana, mora ampiasaina. Ny tontonana lehibe indrindra dia 120x60cm, 14kg ihany ny lanjany, izay azon'ny olona iray atsangana sy atsangana mora foana
Miorina mora. Ny haben'ny takelaka samihafa dia azohidiana mafy amin'ny pin. Ny takelaka dia manana taolan-tehezana ao an-damosina, izay mahatonga ny rafitra tsy mila vatan-kazo sy fantsika nentim-paharazana. Ny tontonana dia misy ny fanamafisana ny fantsom-by, manome antoka ny tanjaky ny rafitra iray manontolo.
Hery lehibe. Ny fitaovan'ny modular formwork dia ny PP (polypropylene) afangaro amin'ny kofehy fitaratra manokana, ary nohamafisina tamin'ny fantsom-by fantsom-by amin'ny plastika izay ahafahan'ny tontonana mitazona tsindry mafy. Ny tahony dia vita amin'ny pin vy, ny tontonana tsirairay dia mihidy farafahakeliny 4 pin, izay mahatonga ny rafitra iray manontolo ho matanjaka.
Afaka miasa tsy misy rindrina amin'ny alàlan'ny tehina. Satria hamafisina amin'ny fantsom-by vy izy io, izay mampitombo be ny tanjany. Rehefa tohanan'ny waling dia afaka miasa izy raha tsy misyrindrina amin'ny tsorakazo mamatotra.
Mora ny misaraka amin'ny beton vita. Noho ny fitsaboana manokana eto ambonin'ny tany dia tsy miraikitra amin'ny formwork ny beton, noho izany ireo takelaka dia tsy mila menaka alohan'ny hampiasana azy, ary azo diovina amin'ny rano fotsiny. Ny tampon'ny rindrina izay namboarin'ireo volavolan-tsika dia malama, azo avela tsy misy fanarenana.
Fanamboarana alimina vita amin'ny aliminioma
Rafitra fanamboarana aliminioma
Rafitra fanamboarana aluminium slab
Rafitra Modular Aluminium Formwork
Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Jack screw azo ovaina, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Sifotra amin'ny fantsom-by vy,